Wave Money x Midasbuy 20% Cashback အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ရန် သိထားသင့်သော စည်းကမ်းချက်များ | Codashop Blog MM
Home Games PUBG Mobile Wave Money x ...
Wave Money x Midasbuy 20% Cashback အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ရန် သိထားသင့်သော စည်းကမ်းချက်များ
(၁) Web Site မှ PUBG Game Items များ ဝယ်ယူပြီး WavePay နှင့် ပေးချေသည့်အခါ ပြန်အမ်းငွေ လက်ဆောင်ကို ခံစားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ငွေလွှဲချေစနစ်တွင် Wave Money ကိုရွေးချယ်ပေးမှသာ ပြန်အမ်းငွေ လက်ဆောင်ကို ခံစားခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) ကျပ် ၁၀,၀၀၀ နှင့်အောက်လျော့သော ငွေပေးချေမှုတိုင်းအတွက် ၂၀% ပြန်အမ်းငွေရရှိမှာဖြစ်ပြီး ကျပ်၁၀,၀၀၀ အထက် ငွေပေးချေမှုများအတွက် အများဆုံး ၂,၀၀၀ကျပ်အထိ ပြန်အမ်းငွေပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
(၄) ဤပရိုမိုရှင်းကိုတော့ WavePay အသုံးပြုသူများအတွက်သာလျှင် ဖြစ်ပြီး ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း တစ်ရက်လျှင် နှစ်ကြိမ်စီသာ အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၅) ပြန်အမ်းငွေ လက်ဆောင်ကို ငွေပေးချေပြီးလျှင် သုံးစွဲသူများ၏ WavePay အကောင့်ထဲသို့ ရုံးဖွင့်ရက် ၅ ရက်အတွင်း ပြန်လည်ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
(၁) ပရိုမိုရှင်းပေးသွားမည့် ကာလကတော့ နိုဝင်ဘာလ 20ရက်မှ 26 ရက်နေ့ထိဖြစ်ပါတယ်။
(ဂ) စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ
(၁) ပရိုမိုရှင်းအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ရန်အတွက် ၎င်းတို့နေထိုင်ရာ၊ နိုင်ငံသားခံယူထားရာ နိုင်ငံများမှ ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသူများ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်မရှိပါ။
(၂) ယခု အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်နိုင်ရန် မည်သည့်အခကြေးငွေမှပေးရန် မလိုအပ်ပါ။ အထူးသတိပြုရန်မှာ Wave Money Call Center နှင့် တကွ ဝန်ဆောင်မှုပေးသောသူများသည် အသုံးပြုသူများ၏ PIN (သို့) OTP များကို မေးမြန်ခြင်းပြုမည်မဟုတ်ပါ။ တစ်စုံတစ်ဦးမှမေးမြန်းလာပါက ဖြေကြားခြင်းမပြုပါနှင့်။
(၃) ယခုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ထားသောသူများမှ မျှဝေထားသော ရုပ်ပုံ၊ ဗီဒီယို၊ စာ နှင့် အခြား အကြောင်းအရာများကို Wave Money မှ ပြန်လည်တည်းဖြတ်ခြင်း၊ အပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ခြင်း၊ စီးပွားရေး ကြော်ငြာများ ၊ အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုခြင်း၊ တိုက်ရိုက် အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း၊ အီလက်ထရောနစ်မီဒီယာများမှ တဆင့်အရောင်းမြှင့်တင်ခြင်း လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုခြင်း များအတွက်ပါ အခွင့်အရေးပေးထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(၄) အထက်ဖော်ပြပါ အချက်များအပြင် Wave Money သည် စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်များအား ကြိုတင်အကြောင်းကြားခြင်းမပြုပဲ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အစားထိုးခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။ ပရိုမိုရှင်းအစီအစဉ်တွင် ဝင်ရောက်ခြင်းဖြင့် အဆိုပါပြင်ဆင်မှုများ၊ ဖြည့်စွက်မှု၊အစားထိုးမှုများနှင့်အတူ စည်းမျဉ်းကန့်သတ်ချက်များနှင့်သာ အားလုံးကို နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်မည်ကို သိရှိလက်ခံထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
(၅) ပြန်အမ်းငွေလက်ဆောင်ပရိုမိုးရှင်း အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာ ရှိခဲ့ပါက WavePay ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကိုသာ အတည်ပြုသတ်မှတ်မည်ဖြစ်သည်။
(၆) အသေးစိတ်အချက်အလက်များအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းလိုပါက Email: [email protected](သို့မဟုတ်) ဝန်ဆောင်မှု ဖုန်းနံပါတ် 900 (တယ်လီနော အသုံးပြုသူများ)၊ 09 79000 9000 (အခြားအော်ပရေတာအသုံးပြုသူများ) ကို ခေါ်ဆို မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
၇) Game item များဝယ်ယူရာတွင် အကြောင်းအရာ တစ်စုံတစ်ရာ အခက်အခဲရှိခဲ့ပါက Midasbuy မှ တာဝန်ယူဖြေရှင်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
Previous articleK/DA goes ALL OUT! ကဒ်အသစ်များ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းအသစ်နှင့်အခြားပရီမီယံဆုများ
Next articlePUBG Mobile Royal Pass Season 16 မှာ ထူခြားတဲ့ Rewards တွေရယူလိုက်ပါ